72 ora izy io ary alefa paositra misy ny antsoina hoe « accusé de réception” , izany hoe fanamarihana fa voaray ny hafatra. Ho an’ny Seces Antananarivo dia tontosa ireo, hoy ny fanazavana. Azo hamarinina izany, hoy ny filohan’ny Seces Tanà, Ny Profesora Grégoire Ravelonirina. Tsy mijery televizionina sy mihaino vaovao angamba ireo tomponanandraikitra, hoy izy. Mampalahelo ny zava-misy satria ny toerana maha tompondraikitry ny minisitera dia toeram-boninahitra ary tsy ny olon-drehetra no tojo izany fa notsongaina tao anatin’ireo mpampianatra mpikaroka, hoy hatrany ity filohan’ny Seces ity. Na izany aza, hoy hatrany ny tenany, dia fanehoana tsy finiavana handray andraikitra ny an’ny minisitera raha nilaza fa tsy naharay taratasy manambara ny fisian’ny fitokonana ety amin’ny anjerimanontolo. Hita ho kivy amin’ny minisitera araka izany ity sampan ity.